IMICIMBI YEADAPTER YOMQHUBI WENETHIWEKHI, KUFUNEKA WENZE NTONI? - ITHAMBILE
Imiba yeAdapter yomqhubi wenethiwekhi, kufuneka wenze ntoni?
Imiba yoMqhubi weAdapter yeNethiwekhi? Ukuba ujongene nonxibelelwano lwe-intanethi olulinganiselweyo okanye akukho ukufikelela kwi-intanethi ingxaki ibangelwa ngenxa yokuba abaqhubi be-Adapter yenethiwekhi bonakele, baphelelwe lixesha, okanye abahambelani ne-Windows 10. inethiwekhi yekhompyutha. Ngokusisiseko, iadaptha yenethiwekhi inoxanduva lokuqhagamshela i-PC yakho kwi-intanethi kwaye ukuba abaqhubi beadaptha benethiwekhi abakafiki, okanye ngandlela thile bonakaliswe emva koko uya kujongana neengxaki zonxibelelwano zenethiwekhi.
Xa uhlaziya okanye uhlaziya Windows 10 ngamanye amaxesha umqhubi wenethiwekhi akahambelani nohlaziyo olutsha kwaye ke ngenxa yoko uqala ukujongana nemiba yoqhakamshelwano lwenethiwekhi njengonxibelelwano olulinganiselweyo lwe-intanethi njlnjl. Ngaphandle kokuchitha naliphi ixesha masibone ukuba Lungisa iiNethiwekhi zoMqhubi weAdapter kwi Windows 10 ngoncedo lwesikhokelo sokufumana ingxaki esidweliswe apha ngezantsi. Esi sikhokelo siza kunceda ukuba uzama ukufaka ikhadi lomnatha, ukukhipha okanye ukuhlaziya abaqhubi beadaptha benethiwekhi, njl.
Lungisa iiNethiwekhi zoMqhubi weAdapter kwi Windows 10
Indlela yoku-1: Khubaza emva koko unike amandla kwakhona iAdapter yeNethiwekhi
Indlela yesi-2: Sebenzisa ingxaki yeAdapter yeNethiwekhi
Indlela yesi-3: I-Flush DNS kunye nokusetha kwakhona ii-Winsock Components
Indlela yesi-4: Hlela kwakhona uqhagamshelo lwenethiwekhi
Indlela yesi-5: Hlaziya abaqhubi beAdapter yeNethiwekhi
Indlela 6: Khipha iadaptha yeNethiwekhi ngokupheleleyo
Indlela yesi-7: Guqula ukuCwangciswa koLawulo lwaMandla kwiAdapter yeNethiwekhi
Indlela yesi-8: Buyela umva kwi-Adapter yeNethiwekhi yoMqhubi
Indlela ye-9: Khubaza okwethutyana iAntivirus kunye neFirewall
Indlela ye-10: Phinda ufake i-TCP / IP
Zama ukukhubaza ikhadi lothungelwano kwaye uphinde unike amandla ukulungisa umba. Ukukhubaza kunye nokwenza ikhadi lomnatha,
Kwibala lokukhangela elibekwe kwibar yomsebenzi wakho, uhlobo ncpa.cpl kwaye ucinezela u-Enter.
Kwifestile yoNxibelelwano lweNethiwekhi, cofa ekunene kwikhadi lenethiwekhi elinomcimbi kwaye ukhethe Khubaza .
Cofa ekunene kwakhona kwikhadi elifanayo lenethiwekhi kwaye ukhethe ' Yenza isebenze ’Kuluhlu.
Cofa iqhosha leWindows + ukuze uvule useto emva koko ucofe Uhlaziyo kunye noKhuseleko.
2 Ukusuka kwimenyu yasekhohlo khetha Ingxaki.
3.Under Troubleshoot nqakraza kwi Unxibelelwano lweIntanethi emva koko ucofe Qalisa isisombululo.
4 Landela eminye imiyalelo eskrinini ukuqhuba isisombululo.
5. Ukuba oku kungasentla khange uwulungise lo mbandela emva koko kwi-Troubleshoot window, cofa apha Iadaptha yenethiwekhi kwaye ucofe ku Qalisa isisombululo.
5.Ukuqalisa i-PC yakho ukugcina utshintsho kwaye ubone ukuba uyakwazi lungisa imiba yeAdapter yeNethiwekhi.
1 Cofa ekunene kwiqhosha leWindows kwaye ukhethe Umyalelo wokukhawulezisa (ulawulo).
2 Ngoku chwetheza lo myalelo ulandelayo kwaye ucofe u-Enter emva komntu ngamnye:
3.Fumana kwakhona i-Command Prompt kwaye uchwetheze oku kulandelayo kwaye ucofe ukungena emva komnye:
4.Qalisa ukusebenzisa utshintsho. Ukucoca i-DNS kubonakala ngathi Lungisa iiNethiwekhi zoMqhubi weAdapter kwi Windows 10.
Cofa iqhosha leWindows + ukuze uvule useto emva koko ucofe Inethiwekhi kunye ne-Intanethi.
2 Ukusuka kwimenyu yasekhohlo khetha Ubume.
3. Ngoku skrolela ezantsi kwaye ucofe ku Ukuseta kwakhona inethiwekhi emazantsi.
4.Qhosha kwakhona Hlela kwakhona ngoku phantsi kwecandelo lokuseta iNethiwekhi.
5. Oku kuya kuseta ngempumelelo iadaptha yakho yenethiwekhi kwaye xa igqityiwe inkqubo iya kuqalwa kwakhona.
Abaqhubi abaphelelwe lixesha sesinye sezizathu eziqhelekileyo zemicimbi yeAdapter Adapter yoMqhubi. Landa ngokulula abaqhubi bamakhadi akho enethiwekhi ukulungisa le ngxaki. Ukuba kutshanje uhlaziye iWindows yakho kuhlobo olutsha, esi sesinye sezizathu ezinokubangela. Ukuba kunokwenzeka, sebenzisa iapps yokuhlaziya yomvelisi njengoMncedisi weNkxaso yeHP ukujonga uhlaziyo lomqhubi.
Cofa iqhosha leWindows + R kunye nohlobo yitshise.msc kwibhokisi yencoko yababini ukuvula umlawuli wesixhobo.
2.Yandisa Iadaptha zenethiwekhi , emva koko ucofe ekunene Umlawuli we-Wi-Fi (umzekelo i-Broadcom okanye i-Intel) kwaye ukhethe Hlaziya abaqhubi.
3.KwiWindows Update Software yeWindows, khetha Bhrawuza ikhompyuter yam ngesoftware yomqhubi.
4 Ngoku khetha Makhe ndikhethe uluhlu lwabaqhubi besixhobo kwikhompyuter yam.
5. Zama uku hlaziya abaqhubi kwiinguqulelo ezidwelisiweyo.
6. Ukuba oku kungasentla akusebenzi yiya ku iwebhusayithi yomenzi ukuhlaziya abaqhubi: https://downloadcenter.intel.com/
7. Qalisa ukusebenzisa utshintsho.
Indlela yesi-6: Khipha iadaptha yeNethiwekhi ngokupheleleyo
Cinezela i-Windows Key + R emva koko uchwetheze yitshise.msc kwaye ucofe u-Enter ukuvula uMphathi weDivayisi.
2 Yandisa iiadaptha zenethiwekhi kwaye ufumane igama leadaptha yenethiwekhi yakho.
3.Qiniseka ukuba Qaphela igama leadaptha xa kunokwenzeka into ingahambi kakuhle.
Cofa ekunene kwiadaptha yakho yenethiwekhi kwaye ukhethe Khipha.
5.Ukuba ubuza isiqinisekiso khetha Ewe.
6. Qala kabusha iPC yakho kunye neeWindows ziya kufaka ngokuzenzekelayo abaqhubi abakhona kwiadaptha yeNethiwekhi.
Ngokufaka iadaptha yenethiwekhi kwakhona, ungaphuma kwifayile ye- Imicimbi yeAdapter yomqhubi wenethiwekhi kwi Windows 10.
Cinezela i-Windows Key + R emva koko uchwetheze yitshise.msc kwaye ucofe u-Enter.
2.Yandisa Iadaptha zenethiwekhi emva koko cofa ekunene kwiadaptha yakho yenethiwekhi kwaye ukhethe Iipropati.
3.Tshintshela kwi Ulawulo lweTab kwaye uqiniseke ukuba sukukhangela Vumela ikhompyuter icime le fowuni ukugcina amandla.
4.Cofa Kulungile kwaye uvale uMphathi weDivayisi.
5. Ngoku cinezela i-Windows Key + ukuba ndivule useto emva koko Cofa kwiNkqubo> Amandla kunye nokulala.
6. Emazantsi cofa useto lwamandla ongezelelweyo.
7. Ngoku cofa Guqula useto lwesicwangciso ecaleni kwesicwangciso samandla osisebenzisayo.
8. Kwindawo yokucofa ezantsi Guqula useto lwamandla oluphambili.
9 Yandisa Useto lweAdapter engenazingcingo , emva koko uphinde wandise Indlela yokuGcina amandla.
10 Ngokulandelayo, uza kubona iindlela ezimbini, 'Kwibhetri' kunye 'nokufakwa ngaphakathi.' Guqula zombini zibe Ukusebenza okuphezulu.
11 Cofa u-Faka ulandelwe ngu-Ok. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
2.Yandisa Iadaptha yenethiwekhi kwaye ucofe ekunene kwi Iadaptha engenazingcingo kwaye ukhethe Iipropati.
3.Tshintshela kwi Ithebhu yomqhubi kwaye ucofe ku Buyela umva kuMqhubi.
4.Khetha u-Ewe / Kulungile ukuqhubeka nokubuyela umva komqhubi.
5. Emva kokuba ukubuyela umva kugqityiwe, qala kwakhona iPC yakho.
Jonga ukuba uyakwazi na Lungisa iiNethiwekhi zoMqhubi weAdapter kwi Windows 10 , ukuba akunjalo qhubeka nendlela elandelayo.
Ngamanye amaxesha inkqubo yeAntivirus inokubangela ukuba Umcimbi we-Adapter yenethiwekhi kwaye ukuze uqinisekise ukuba le ayisiyiyo imeko apha, kuya kufuneka ukhubaze i-antivirus yakho kangangexesha elithile ukuze ujonge ukuba impazamo isabonakala na xa i-antivirus icinyiwe.
1 Cofa ekunene kwi Inkqubo yeAntivirus kwinkqubo yetreyi kwaye ukhethe Khubaza.
2 Okulandelayo, khetha ixesha elimiselweyo Antivirus iya kuhlala ikhubazekile.
Qaphela: Khetha elona xabiso lincinci linokwenzeka ngokomzekelo imizuzu eli-15 okanye imizuzu engama-30.
3.Ukwenziwe, kwakhona zama ukunxibelelana nenethiwekhi ye-WiFi kwaye ujonge ukuba impazamo iyasombulula okanye hayi.
4. Cinezela iWindows Key + R emva koko uchwetheze ulawulo kwaye ucofe u-Enter ukuvula Iphaneli yokulawula.
iifestile ezili-10 azikwazi ukukhanyisa ukukhanya ebusuku
5 Okulandelayo, cofa apha Inkqubo kunye noKhuseleko.
6. Emva koko ucofe ku IWindows Firewall.
7. Ngoku kwiqhosha lasekhohlo lefestile cofa Cima okanye ucime iWindows Firewall.
8. Khetha Cima iWindows Firewall kwaye uyiqale kwakhona iPC yakho.
Zama kwakhona ukunxibelelana nenethiwekhi ye-WiFi kwaye ubone ukuba uyakwazi ukusombulula imiba ye-Adapter yenethiwekhi.
Ukuba akukho nanye kwezi ndlela iyakusebenzela, kuya kufuneka usete kwakhona isitaki se-TCP / IP. IProtokholi ye-Intanethi eyonakeleyo okanye i-TCP / IP inokukuthintela ekufikeleleni kwi-intanethi. Ungacwangcisa kwakhona i-TCP / IP usebenzisa i-Prompt yomyalelo okanye ngokusebenzisa isixhobo seMicrosoft ngqo. Yiya kule ndawo ilandelayo ukuze wazi ngakumbi nge eziluncedo .
Ndiyathemba ukuba la manyathelo angentla akwazile ukukunceda Lungisa iiNethiwekhi zoMqhubi weAdapter kwi Windows 10 kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo okanye iAdapter yeNethiwekhi ke uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
ukuskena nokulungisa i-drive ebambeke kwi-100
Imephu zikaGoogle azisebenzi
Ungawucima njani umculo we-groove
windows 10 ayihlaziywa ukuya ku-1903
Yintoni windows.old kwiifestile 10
imiba yokusombulula iingxaki kunye nokuhlaziywa kweewindows